ONIVERSITEN’I MAHAJANGA : Hiditra amin’ny 6 marsa ny taom- pianarana 2017
Taoriana ny fivorian’ireo mpampianatra mpikaroka sy ny mpitantana ny oniversite manerana ny Nosy, ny volana janoary teo dia nivoaka ny daty hidiran’ireo mpianatra eny amin’ny Anjerimanontolo manerana an’i Madagasikara. 2 février 2017
Ho an’ny Oniversiten’i Mahajanga dia fantatra fa amin’ny 6 marsa 2017 izao no daty hisokafan’ny taom-pianarana vaovao ary hanomboka ny 6 febroary ka hatramin’ny 31 marsa no fisorotana anarana mikasika ny vatsim-pianarana sy ny trano.
Sampam-pampianarana roa ISSTM sy ny fampianarana Lalàna ary ny ELCI no efa fantatra fa niditra mialoha amin’ny fiatombohan’ny volana febroary izao, noho ny fahalavan’ny fandaharam-pianaran’izy ireo. Ireo sampam-pampianarana rehetra eo anivon’ny Oniversite Mahajanga ankoatra ireo efa voalaza fa manana fandaharam-potoana lava no miaraka miditra amin’ny daty izay nivoaka io hoy ny tompon’andraikitra.
Aorian’ny fidirana io anefa dia hisy ny herinandron’ny fampianarana izay entina hijerena ny olana sy ny fomba hanatsarana ny fampianarana amin’ny sampam-pianarana rehetra ary hisy koa ny fampiharana ny rafitra LMD.
Efa samy manana ny daty hanatanterahina io herinandro ny fampianarana avokoa ny taranja rehetra misy ao amin’ny Oniversite ka ny sampam-pianarana Siansa ho hisantatra azy ny 20 febroary izao ary manaraka azy ao ireo taranja hafa. Nilaza ny mpitantana ny Oniversite Mahajanga fa hiezaka ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mikasika ny fandoavana ny vatsim-pianaran’ireo mpianatra izao mbola tsy voaloa ny roa volana ka ho aloa izany aorian’ny fotoana hidiran’ireo mpiantra mba tsy hisian’ny korontana mety hitranga rehefa tonga ny daty izay efa voatondro.
Zazavavy maty natelin’ny renirano ny alahady 22 novambra lasa teo BEFOTAKA AVARATRA (339) 24 novembre 2020 Sarona ireo teti-dratsy goavana vitan’i Prudence FISOLOKIANA AO AMIN’NY FACEBOOK (172) 26 novembre 2020 Zanany sy zafikeliny ihany no nahafaty an’ilay pasitera FANAFIHANA TAO MIARINARIVO (160) 24 novembre 2020 Ben’ny tanàna teo aloha tratra anolana zazavavy tsy ampy taona ANTOBY- MIARINARIVO (114) 26 novembre 2020 Liana amin’ny fampandrosoana imasoan’ny Fitondrana ankehitriny BEN’NY TANANA TIM (86) 24 novembre 2020 « Ahiana ny mety hisian’ ny kolikoly », hoy ny Kmf/Cnoe LOHOLONA (83) 24 novembre 2020